Ku Soodhawow Shati-siinta Ganacsiga Cuntada iyo habka ku hagaya(wizard ka) Badbaadada Cuntada ee Cusub ee Waaxda Beeraha
Fadlan ka jawaab su'aalaha hoose ee habka ku hagaya(wizard ka) si ay kaaga caawiyaan inaad go'aansato shatiga aad u baahna karto mustaqbalka hadii aad ganacsiga cuntada oo cusub ee Minnesota aad furaneyso.
Talo: Waxaa dhici karta inaad u baahato qalin iyo warqad si aad xusuusqor u samayso.
Ma leedahay ganacsi cunto oo shati leh oo ma rabtaa inaad ballaadhiso ama dib-u-habayso, ama meel kale u rarto ganacsigaaga?
Ma leedahay ganacsi cunto oo shati leh oo ma rabtaa inaad iska gaddo ganacsigaaga?
Haddii ay haa tahay jawaabtaadu, fadlan wac 651-201-6062 ama iimeyl u dir mda.licensing@state.mn.us
Ganacsiyada cuntada qaarkood uma baahna shati Minnesota gudaheeda. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ganacsiyada noocaan ah guji.
Fadlan xor baad u tahay inaad la xidhiidho/keensato adeeg tarjumaad oo aad adigu dooraty, oo adigu kharashka aad iska bixineyso, si aad u hesho kaalmo dheeraad ah oo ku saabsan ilaha iyo shuruucda MN ee Ingiriiska ku qoran. Ma tarjumi karno Shuruucda MN ama ilaha ka yimaada hay'adaha/ururrada kale.
Waan aqaan nooca shatigeyga. Hadda maxaan sameeyaa?